Faits-Divers – Page 865 – Midi Madagasikara
Sakaraha : Kandidà iray tsy lany nitondra nitsoaka ny vata fandatsaham-bato
Redaction Midi Madagasikara 6 août 2015 0 Comment
Mipoitra tsikelikely amin’izao ny fandikan-dalàna nisy nandritra ny androm-pifidianana ny 31 jolay teo. Ny harivan’ny zoma teo, tany amin’ny distrikan’i Sakaraha, dia kandidà iray tsy lany (mangidy hoditra sy naloan’ny vahoaka) no nampiasa ny habibiany nanapoaka basy nampihorohoro ny mpifidy tao amin’ny fokontany Mihavatsy. Tsy izany ihany fa nisy trano koa nodorany. Nalain’ity kandidà, izay…
Halatra anaty fiara : Sakaosy nifampisintonana
Ny harivan’ny talata teo, nitohana tsy nisy ohatra an’izany ny fifamoivoizana teny Andohotapenaka. Ary tsy tara amin’ny fomba fangalarana ny jiolahy. Ny loharanom-baovao no nahafantarana fa nisy telolahy nanodidina fiara iray efa nokendreny. Iray teo aloha, iray teo amin’ny ilany havia ary ny fahatelo niondrika tao ambany fiara nivelively kapoaka. Raha nahare izany ny mpamily…
Arivonimamo : Jiolahy saika handeha hanafika voatomboky ny angady
Tato ho ato izay dia nanjaka tokoa ny asan-jiolahy tao andrefan’ny renivohitra tao. Ny alatsinainy lasa dia tokantrano telo no indray lasibatry ny jiolahy mirongo kalaky, tao Arivonimamo. Tsy nahavanona ny asa ratsiny anefa ireto olon-dratsy, eny fa na dia teo aza ny firefodrefotry ny basy nentin’ireto totakely nampiatahorana ireo mponina. Araka ny fampitam-baovao avy…
Andohatampenaka : 30 lahy nirongo kalaky nanafika mpivarom-boanjo sy gargôty
Nihorohoro ireo mponina teny Andohatampenaka, ny talata hariva lasa teo. Tonga aty an-drenivohitra ve ny dahalo ? Andian-jiolahy teo amin’ny 30 lahy teo tokoa no indray nandrava mpivarotra maromaro teny an-toerana io hariva io, tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany teo. Samy manao kilaoty fohy kely avy izy ireo, ary tsy miteny ny amin’ny fiteny…
Tandremo ny mpisoloky
Ankizy vavy iray no sendra mpisoloky, omaly. Araka ny vaovao dia niara niditra tao amin’ny toeram-piasana iray ny olona roa, vavy daholo. Toa hoe nilaza ilay mpisoloky fa mahatafiditra miasa ao amin’io toerana io. Rehefa teo am-baravarana dia nilaza ilay mpisoloky fa mila ny nomeraon’ny telefonin’ilay ankizy vavy. Tsy nisy azo nanoratana anefa tany aminy…
Toliara : Nodoran-drangahy ny trano fa nisarahan’ny vadiny izy
Redaction Midi Madagasikara 6 août 2015 1 Comment
Noho ny hatezerana tsy nahazaka nisaraham-bady, rangahy iray 47 taona no saika handoro trano miisa 10 tafo tao Toliara, ny alatsinainy antoandro teo, raha avy nandoro ny tranony izy. Tezitra ny olona teo an-tanàna mpifanolo-bodirindrina taminy ka nidaroka azy. Saika nanaraka hatramin’ny ain-dehibe noho ny vono nahazo azy, raha tsy nalaky tonga sy niditra an-tsehatra…
Antsirabe : Trano may, vola an-tapitrisany levon’ny afo
Redaction Midi Madagasikara 5 août 2015 0 Comment
Nitrangana haintrano mahatsiravina indray teto Antsirabe, omaly tokony ho tamin’ny 4 ora teo ho eo. Trano telo no indray kilan’ny afo, tsy nisy azo noraisina intsony fa levona tanteraka, raha toa ka voatery noravana kosa ny iray hanavotana ny fananana tao anatiny. Tsy nisy noraisina intsony ny entana rehetra tao amin’ireo trano telo, fa dia…
Antanifotsy : Mpivarotra namonjy fodiana voasakana, lasa ny 4 tapitrisa ariary
Nisehoana fanakanan-dàlana, tao amin’ny distrikan’Antanifotsy, ny faran’ny herinandro lasa teo, ka vola 4 tapitrisa ariary no voalaza fa lasan’ireo jiolahy. Tao amin’ny làlana mihazo an’Andranofito no voalaza fa nisehoan’ity asan-jiolahy ity. Mpivarotra avy namonjy tsena no lasibatra tamin’izany, ankevitry ny efa nandrasan’ireo jiolahy ihany ity mpivarotra ity, raha ny filazan’ny loharanom-baovao azy. Avy any Andranofito…
Fanendahana sy vaky fiara : Mpanasa fiara manararaotra mangalatra sy manendaka
Tsy mitsahatra mitady hevitra hafa tokoa izy ireo, hanantanterahana ny asa ratsiny. Toy ity endrika vaovao entin’ireo mpanendaka sy mpamaky fiara indray hanaovana izany. Maromaro amin’ireo mpampiasa làlana sy tompona fiara tokoa no mitaraina, ny amin’ny fisian’izany amin’ny faritra sasantsany eto Andrenivohitra. Mody manao toa ireny mpanasa fiara eny amin’ny sisin-dàlana ireny indray mantsy ry…
Asan-jiolahy : Alika mpitsongodia namantana tanaty biraon’ny mpitandro ny filaminana
Redaction Midi Madagasikara 5 août 2015 2 Comments
Tsy ilay alika akory no nanao asan-jiolahy, fa nampiasiana kosa izy mba hanarahan-dia ireo olon-dratsy. Nanao ny asany tokoa izy amin’ny maha mpitsongodia azy. Akory ny hagagan’ny mpanao fanadihadiana fa nivantana tao amin’ny biraon’ny mpitandro ny filaminana ilay biby. Samy nangidihidy avokoa ny lohan’ny rehetra, na ireo mpanao fanadihadiana izay nampiasa ny alika, na koa…
← Previous 1 … 864 865 866 … 1 219 Next →